အမည်: Ursolic Acid No .: UA အမှတ်တံဆိပ်: NaturAntiox အမျိုးအစားများ: စက်ရုံထုတ်ယူမှုလက်တင်အမည်: Rosmarinus officinalis အသုံးပြုသောအပိုင်း - Rosemary Leaf အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - 25% ~ 98% HPLC အသွင်အပြင် - အဝါရောင်အစိမ်းရောင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်အမှုန့်ပျော်ဝင်နိုင်မှု - ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်မှု CAS NO .: 77-52-1 အီး ...
အမည် - Rosmarinic အက်ဆစ်အမှတ် - RA အမှတ်တံဆိပ် - NaturAntiox အမျိုးအစား - စက်ရုံထုတ်ယူမှုလက်တင်အမည် - Rosmarinus officinalis အသုံးပြုသောအပိုင်း - Rosemary Leaf အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - ၁% မှ ၂၀% HPLC အသွင်အပြင် - အညိုရောင်အမှုန့်ပျော်ဝင်နိုင်မှု: ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်မှု CAS NO .: 537-15-5 ထိရောက်မှု: သဘာဝ antiox ...
ဖော်ပြချက်ပိုးစာအရွက်ထုတ်ယူမှုသည် Morusalbal ၏အရွက်ခြောက်များရှိ Aqueous ထုတ်ယူမှုသို့မဟုတ်အီသနောထုတ်ယူမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် flavonoids, alkaloids, polysaccharides စသည်တို့ပါဝင်သောအရာများပါဝင်သည်။ ဒါဟာကျန်းမာတဲ့ပြproblemsနာများစွာနဲ့ကူညီဖို့သက်သေပြခဲ့သည်။ ယခုအခါပိုးစာအရွက်သည်သစ်သီးဝလံများ ...
နိဒါန်းနှင့်နောက်ခံများGeneCare® Mulberry Leaf Extract သည်စားသုံးနိုင်သောပျိုးပင်မှိုအရွက်မှသဘာဝထုတ်ယူသောအရာဖြစ်ပြီး၎င်းသည်သွေးဂလူးကို့စ်ပမာဏကိုထိန်းချုပ်ရန်သက်သေပြခဲ့သည်။ ဆီးချိုရောဂါသည်ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါကိုသက်သာစေနိုင်ကြောင်းလေ့လာမှုအရသိရသည်။
နိဒါန်းနှင့်နောက်ခံအကြောင်းအရာ Fenugreek အမျိုးအနွယ်သည်ရိုးရာတရုတ်ဆေးပင်ဖြစ်ပြီးတရုတ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်သည့် Pharmacopoeia တွင်ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ဖက်တီးအသည်းကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကုသရန်အသုံးပြုသည်။ နှစ်ပေါင်းရာနှင့်ထောင်ချီ။ သွေးတွင်းသကြားဓာတ်နှင့်အဆီဓာတ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ဒီထဲမှာရာဂဏန်းပါပါတယ်
နိဒါန်းနှင့်နောက်ခံအကြောင်းအရာများ Fenugreek မျိုးစေ့သည်တရုတ်ရိုးရာအပင်ဖြစ်ပြီးတရုတ်ဆေးဝါးထုတ်လုပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်ကျန်းမာသောအသည်းကိုထိန်းသိမ်းရန်၊ သွေးသကြားနှင့်အဆီများကိုထိန်းညှိရန်၊
NaturAntiox Rosemary ထုတ်ယူမှု
ကုန်ပစ္စည်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များNaturAntiox®ကို Rosemary, Rosemary မှထုတ်ယူလိုက်ပြီး၎င်းထုတ်ကုန်သည်အစိမ်းရောင်အစာဖြည့်စွက်ဆေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘက်တီးရီးယား၊ ရောင်ရမ်းမှု၊ anti-oxidant၊ ။
GeneFenu Fenugreek မျိုးစေ့ထုတ်ယူ
GeneFenu®ကို fenugreek အစေ့များမှထုတ်ယူသည်။ Fenugreek သည်အပင်များပရိုတိန်း、 သွားဖုံး၊ အမျှင်၊ alo alkaloid များ、 flavonoids、 saponins နှင့်မတည်ငြိမ်သောပါဝင်မှုများသောအရင်းအမြစ်များဖြစ်သောဆေးဖက်ဝင်အပင်များဖြစ်သည်။ လူ့နှင့်တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများအရ၎င်း၏အစေ့များမှထုတ်ယူနိုင်သည့်အရာ imp imp ...
အမည်: Rosemary မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအမှတ် .: RO အမှတ်တံဆိပ်: NaturAntiox အမျိုးအစားများ: စက်ရုံထုတ်ယူမှုလက်တင်အမည်: Rosmarinus officinalis အသုံးပြုသောအပိုင်း - Rosemary Leaf အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - ၁၀၀% GC ပုံပန်းသဏ္:ာန် - အဝါရောင်အရည်ပျော်ရည် - ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော CAS NO .: 2244-16-8 ထိရောက်မှု : နှင်း ...
စျေးကွက်အခွင့်အလမ်းများအောက်ဆီဒင့်သည်အစားအစာပျက်စီးမှု၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ခြင်း၊ အရောင်ပြောင်းသွားခြင်း၊ အရောင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ အရောင်ပြောင်းလဲစေခြင်းနှင့်အာဟာရတန်ဖိုးလျော့နည်းစေခြင်းတို့ကြောင့် Rosemary Extracts သည် polyene fatty acid နှင့်fတို့၏ပြိုကွဲခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်။